RedNotebook: Casharrada Isticmaalka. | Laga soo bilaabo Linux
RedNotebook: Casharrada Isticmaalka.
Pavloco | | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Sidii lagu balamay, halkan waxaa ah casharrada loo adeegsanayo joornaalkaan furan ee furan iyo aaladda aaladda loogu talagalay Linux.
3 Khad Cusub iyo Baaragaraafyo
5 Geesinimo, Italic, Xariiq hoosaad iyo Strikethrough
6 Abuur Liisas
8 Gali Iskuxirayaasha iyo Sawirada.
Si loo bilaabo, waa in la caddeeyaa inay jiraan laba nooc oo aragti ah oo ku jira RedNotebook:
Habka "wax ka beddel" Qaabkaan ayaa wax lagu qoro ayaa la abuuray. Waxay ku qoran yihiin qoraal cad, taasi waa, inta badan waxa aad halkan kuqorto ma lahaan doonaan qaab nooc ah. (Fiiri sawirka hoose)
Habka "Horudhac": Waxaan jeclahay inaan ugu yeero "Akhriska Akhriska" maxaa yeelay waa halkaan ka helno wixii aan qornay, laakiin horeyba qaabkii aan ugu xilsaarnay iyada oo loo marayo astaamo gaar ah oo loo adeegsaday Edit Mode. (Eeg sawirka guud)
Waxaan dhex dhexaadin karnaa inta udhaxeysa tifaftirka iyo aragtida adigoo adeegsanaya badhanka menu-ka, ama amarka Ctrl + P
Halkan waxaa ku soo dhacaya waxa xiisaha leh iyo in laga yaabo inuu ka nixiyo qaar ka mid ah isticmaaleyaasha "dhibka" awgood, laakiin waxaan kugula talinayaa inaadan is dhiibin, way fududahay markaad la qabsato.
Si aad u raacdo casharka waxaad arki kartaa labada sawir tusaale, oo u dhigma midba midka kale, kan hore waa natiijada ugu dambeysa, tan labaadna waa qoraalka qaabka tifaftiraha.
Si aad ugu xilsaarto qaabka, geli qaabka tafatiraha. Markaad abuureyso qoraalka waxaad ogaan doontaa (gaar ahaan haddii ay dheer tahay) in markii aad aadeyso qaabka shaashadda qoraalka uu u muuqdo mid gebi ahaanba ka maqan qaab ahaan, iyadoon xariiqyo jabin ama sadarro lahayn. Marka markaad sameysid galitaanka joornaalka, maskaxda ku hayso talooyinka soo socda.
Khad Cusub iyo Baaragaraafyo
Sida aad ogaan doontid, sameynta a kala goynta khadka qoraalkaaga oo kujira Qaabka Tifatiraha, kama muuqato natiijada qaabka Hordhaca. Si tan loo gaaro dhamaadka sadar kasta waa inaad ku dartaa "\_\_" oo aad ku sii socotaa khadka xiga ee xiga.
Si loo abuuro a cutubka cusub, waa lagama maarmaan in laga tago xariiq maran.
Ku dar a khadka kala kudar labaatan calaamadood oo isle'eg oo isku xigxigta (==================)
para cinwaan geli waxaad haysataa laba ikhtiyaar. Mid waa inaad tagtaa qaybta 'Insert / Title menu'. Ikhtiyaarka kale ayaa ah inaad gacanta ku qabato, adoo ku daraya calaamadda siman (=) bilowga iyo dhammaadka xariiqda aad rabto inaad cinwaan uga dhigto.
Faa'iidada dhabta ah ee aad ku sameysid gacanta ayaa ah inaad u xilsaari karto heerka cinwaanka, taas oo ah, abuur cinwaanno, cinwaanno hoose, cinwaanno hoose, iwm. Maaddaama haddii aad ku darto laba calaamadood oo isle'eg (==) waxaad abuureysaa cinwaan hoosaad, oo leh saddex calaamadood (===) cinwaan hoosaad iyo wixii la mid ah (sida El Chavo del 8 sheegay).
Geesinimo, Italic, Xariiq hoosaad iyo Strikethrough
Si tan mar kale loo gaaro, waxaad ikhtiyaar u leedahay jaantusyada ama astaamo ahaan.
Si qoraalka loo dhigo geesinimoTusaale ahaan, waxaad isticmaashaa xiddig laba jibbaar ah (**) kahor iyo kadib ereyga ama khadka aad rabto inaad muujiso. Sidoo kale in la meeleeyo Cilmiga isticmaal laba laab (//), si hoosta ka xariiq laba jibaar hoosta (__) iyo ka bax laba jibaaran (-).
Si aad u abuurto liisaska waxaad mar kale leedahay xulashada garaafka ee ku qoran menu-ka Geli / Liiska Liiska. Xaaladdan oo kale, faa'iidada habka gacanta ayaa ah inaad adigu go'aamin karto haddii liiskaagu adeegsado dhibco ama lambar.
La barta rasaasta waxaa loo qoondeeyey iyadoo la dul dhigayo jajab (-) safka ka hor, halka kan lambar waxaa loo qoondeeyay calaamada lagu daray (+).
Si aad u abuurto heerar liisaska (oo keliya leh xabbadaha), waa inaad ka tagtaa laba meel astaanta ka hor si aad u abuurto cunsur heer-labaad ah, afar boos oo qayb saddexaad ah, iwm.
Calaamadaha ayaa loo qoondeeyay astaamaha rodol (#). Qoraalkii ugu dambeeyay, waxbaa laga sheegay dhibaatooyinka ka dhashay xaqiiqda ah in hal qoraal kaliya maalintii la abuuri karo. Anigu shaqsiyan waan la qabsaday xaaladdan anigoo adeegsanaya sumado. Tusaale ahaan, haddii arrin ama qoraal uu la xiriiro shaqadayda, waxaan isticmaalaa hashtag #Dispatch. Marka waa inaan isticmaalo bar raadinta si aan u helo calaamadda Dispatch-ka iyo haddii qoraalka uu ku saabsan yahay mowduuc gaar ah waxaan sidoo kale u isticmaalaa calaamadda maaddadaas. Ku darista tan in qoraallada la sharraxayo maalin kasta, ficil ahaan "Si wanaagsan ayaan u qabtay."
Gali Iskuxirayaasha iyo Sawirada.
RedNotebook sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad sawirro ku darto qoraaladaada, ama xiriiriyeyaasha feylasha maxalliga ah ama bogagga internetka. Si aad u isticmaasho shaqooyinkan waxaan si buuxda ugu talinayaa qaabka garaafka ee Gali menu. Waa mid aad u fudud natiijaduna waa mid cabsi badan.
Tani waa halka ay ku dhammaato casharradayda ku saabsan adeegsiga RedNotebook. Waxaa jira xulashooyin kale oo horumarsan oo laga yaabo inaan ka hadlo waqti kale.
Waxaa laga yaabaa inaad sii wadato inaad haysato usbuuc wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » RedNotebook: Casharrada Isticmaalka.
Waxaan soo arkay dhejisyo leh qaab noocan ah.
Waxaan u arkaa dhib badan buugaagta xusuus qor ama xusuus-qor.
Ma fahmin fikradda.
Faa'iidooyin noocee ah ayey le'eg tahay marka loo barbar dhigo processor-ka ereyga Liibiya sida AbiWord?
Caadi ahaan, inay leedahay jadwalka taariikhda iyo mashiinka raadinta ee ka mid ah tayada kale. Waxaan kugula talinayaa qaybta koowaad ee maqaalka.
Waan ka cudurdaaranayaa haddii aad carqaladeyneyso faallooyinka, gebi ahaanba ma aadan ka warqabin barnaamijka.
Salaan iyo mahadsanid macluumaadka.
Aad ayey ufiican tahay, tilmaam kale, haddii safka hore aan kaga tagno cilad lasaab tab ah waxay siineysaa saameyn wanaagsan cutubka loo adeegsan karo sameynta liisaska ama wax la mid ah.
Waxay i xasuusisaa LaTeX
Ma jirtaa wax suurtagal ah oo looga hortegi karo barnaamijka inuu ka gudbo ereyada ama weedhaha ku lifaaqan laba jiif? Waxaan aad u isticmaalaa dashka laba-laabma maxaa yeelay Libreoffice ayaa si otomaatig ah ugu beddeleysa dash-dheer mana doonayo inaan ereyada ka gudbo. Dhinaca kale, ma hoosta ka xariiqo ama ma isticmaalo geesinimo iyo ku dhowaad weligood farta ma jirtaa waddo looga saaro xulashooyinkaas oo si otomaatig ah loo adeegsado?
Sida loo abuuro "dhibic soo celin" Clonezilla
Primary Master DNS oo loogu talagalay LAN on Debian 6.0 (V) iyo finalka